गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर चालिसे र इन्जीनियर बाँनियालेनै बनाए किर्ते कागजात,नगरप्रशासन भन्छ ‘रेकर्ड छैन’,कसरी बन्यो त्यो पत्र ? - Gokarna News from Nepal
काठमाडौं – गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेका एकपछि अर्का काण्डहरु पर्दाफास हुँदै जान थालेका छन् । बालुवाखानी अवैध रुपमा संचालन गर्न स्वीकृत दिने देखी जथाभावी प्लटिङ कित्ताकाट सिफारिस दिने कामहरु मेयर सन्तोष चालिसेले दिदैं आएका प्रमाणहरु भेटिएका छन् । गोकर्ण न्यूजलाई प्राप्त प्रमाणहरुमा मेयर चालिसे र नगरपालिका इन्जीनियर अजय बाँनियाको मिलिमतोमा अवैध रुपमा ह्यगृव भैरब वालुवा तथा ढुङ्गा खानी प्राली लाई अनुमती पत्र दिएको भेटिएको हो ।
ह्यगृव भैरब प्राली दर्ता गर्दा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र प्रवन्ध पत्रमा उक्त वालुवा उद्योग नुवाकोटको ओखरपौवा गाविस वडा १ मा संचालन गर्ने भन्दै दर्ता गरेको छ,भने काठमाडौं महानगरपालिका वडा ३१ शंखमुल मा रजिष्टर्ड कार्यालय रहने व्यहोरा उल्लेख छ । तर गोकर्णेश्वर नगपालिकाका मेयरको तोकमा सो कम्पनी धमाधम गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा ३ मा संचालन भइरहेको छ ।
उक्त कम्पनीलाई मेयर चालिसे कागज किर्ते गरेरै स्विकृत पत्र दिएको पाइएको छ । ऐन नियम कानुन मिच्दै मेयर चालिसेले सो पत्र दिएका हुन ।उनले दिएको स्विकृत पत्र नगपालिकाको कुनै पनि शाखामा समेत भेटिएको छैन । यसबारे गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अग्नीप्रसाद अधिकारीले सो कम्पनी संचालनको लागी पत्र नदिएको भन्दै मेयरले दिएको स्वीकृत पत्र समेत नगरपालिकाको कुनै शााखमा नरहेको बताए । उनले भने‘‘मेयर सापले दिएको त्यो स्वीकृत पत्र नगपालिकाको कुनै पनि शाखामा भेटिएको छैन, सो कम्पनी,उद्योगलाई बालुवाखानी संचालन गर्न नगरपालिका प्रशासन फाँटले कुनै पत्र दिएको छैन । मेयर सापले दिएको पत्र कसरी गयो,कसरी बन्यो,त्यो हामीलाई जानकारी भएन’’
मेयर चालिसेले किर्ते गरेर दिएको पत्रमा भनिएको छ ‘गोनपा वडा ३ को संधियार सहमती तथा सर्जमीन सहितको सिफारिस पत्र तथा इन्जीनियर अजय बानियाँको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा गोनपाको ३ को टोठाडोलमा खानी संचालन तथा वालुवा प्रशोधन गर्न अनुमती दिएको छ । यसबारे इन्जनियिर अजय बाँनियाले आफुँले कुनै प्रतिवेदन नदिएको बताए । उनले भने ‘मैले संधियार सहमती तथा सर्जमीन पत्रहरु हेरेको हुँ तर उपयुक्त छ भनेर प्रतिवेदन मैले दिएको छैन । मरो नाम राखेर मेयर सापले कसरी लेख्नुभयो म यसबारे आफै अनविज्ञ छु । किन लेखियो मेरो नाम ? के प्रतिवेदन दिएर लेख्नुभयो भन्नेबारे मेयर सापबाट जानकारी लिन्छु ।’
उनको यो भनाईलाई आधार मान्ने हो भने इन्जीनियरले गएर निवेदकको पत्र र सधियारको सहमती कित्ता काट मात्र हेर्छ वा कहाँ संचालन गर्न लागेको छ । यस वडामा पर्छ वा पर्दैन ? नियम संगत ढङ्गबाट डकुमेन्ट आएका छन् वा छैनन् त्यो हेररे पत्र बनाउँछ कि हचुवाको भरमा कसैले मसँग कम्पनी छ, मैले संचालन गर्न पाउँ भनेकै आधारमा स्विकृत दिन्छ ? कानुन र नीती नियम र निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर इन्जीनीयरको मनले लागेका कुरामा दिइन्छ ? यसरी कानुन भन्दा बाहिर गएर डकुमेन्ट नहेरी अनुमतीको लागी पत्र दिनु कहाँ सम्मको गैर जिम्मेवारी कार्य हो ?आफै वोक्सी आफै झाक्री बन्ने इन्जीनियरको कतै द्धय्द चरित्र त होइन ? अनुसन्धानबाट सबै खुल्दै जाला ।
त्यस्तै नगरपालिका भित्र हुने र भए गरेका विभिन्न उद्योग , कम्पनी संचालन गर्न नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको हुन्छ । त्यही समितिले इन्जीनियर र वडाले ठिक भएको प्रतिवदेन दिएको खण्डमा उपमेयरनै स्वयम स्थलगत अनुगमनमा पुगेर सो प्रतिवेदनलाई मुर्त रुप दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर यहाँको सवालमा भने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ती नेपालले यसबारे आफुलाई थाहै नभएको यसअघिनै बताई सकेकी छन् । उनले भनिन् ‘मलाई खानी संचालन गराउन , वा कम्पनी , उद्योग संचालन गर्नको लागी कुनै पत्र वा जानकारी आएको छैन । म के का आधारमा अनुगमनमा जानु । मेरो उपस्थितीमा त्यस्ता वालुवा खानी संचालनको लागी कुनै अनुगमन र स्विकृत दिने काम म बाट भएको छैन । त्यस्तो अन्य ठाउँमा कम्पनी दर्ता भएर यहाँ आएर संचालन गरेको छ, भने त्यो खारेज हुन्छ,हाम्रो क्षेत्राधिकार भनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र हो । नुवाकोट र कामनपा ३१ मा रहेका कम्पनी उद्योगको होइन । त्यसरी झुठ्ठा विवरण पेश गरेका संचालकलाई समेत कारवाही हुन्छ । त्यस्ता कार्य रोकिन्छन ।’
यसरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने लाखौं रकमको चलखेलमा अवैध कामलाई नै नगरपालिका प्रमुखलेनै वैधता दिन किर्तै कागजनै खडा गर्नुले कानुन विधि र नियमको उंलधन मात्र नभई अपराध समेत हो । यसैगरी जनप्रतिनिधि र मेयरको नाममा किर्ते कागज बनाउँदै जाने र केही अमुख व्यत्तिले लाखौं रकम कुल्याउने धन्दामा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जरुरी छ ।